५० हजारमा टुंगियो साङ्लो विवाद
Posted on: February 06, 2020
आर्टिष्ट खबर/ माघ, काठमाडौं ।
चलचित्र साङ्लोमा समावेश ‘झ्याम्मै आँखा झ्याम्मै...’बोलको गीतको विवाद टुंगिएको छ । शब्द चोरिएको भन्दै गएको शुक्रवार निर्देशक सुदीप भुपाल सिंहले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि दुईपक्ष बिच विवाद सुरु भएको थियो । यो गीतको शब्द आफूले लेखेको तर जानकारी विनै फिल्ममा राखिएको र रचनाकारमा आफ्नो नाम पनि नराखेको भन्दै उनले उजुरी दिएका थिए ।
बुधबार संगीतकार सुरेश अधिकारी र निर्देशक सुदीप भुपाल सिंहबीच यूट्युबमा ‘झ्याम्मै आँखा झ्याम्मै...’ गीतमा दुवैको नाम गीतकारमा राख्ने गरि विवाद सल्टिएको हो । निर्देशक सुदीपले क्षतिपूर्ति स्वरुप आफूले ५० हजार १ रुपैयाँ पाएको बताए । बुधबार पत्रकारसँगको भेटमा उनले कानुन अनुसार पाएको क्षतिपूर्तिको रकममध्ये एक रुपैयाँमात्र आफूले घर लिएर जाने बताए ।
उनले आफूले पाएको ५० हजार स्वर्गीय केशव भट्टराईको परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने र बाँकी एक रुपैयाँ घर लिएर जाने बताए । मंगलवार अभिनेता विराज भट्टले पत्रकार सम्मेलनमा ठूलो रकम मागेर आफूमाथि ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न खोजेको भन्ने आरोपबारे पनि निर्देशक सिंहले मुख खोलेका छन् । उनले आफूले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेको भए कानुनी सजाय भोग्न तयार रहेको बताए ।
अभिनेता विराजले, निर्देशक सिंहले १०,२० लाख मागेर ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । तर, निर्देशक सिंहले आफूले त्यति ठूलो रकम आफूले माग नगरेको दाबी गरे । संगीतकार अधिकारीले पनि निर्देशक सिंहले त्यति ठूलो रकम माग गरेको आफूले नसुनेको बताए । प्राविधिक त्रुटीका कारण गीतकारमा निशान भट्टराईको नाम पर्न गएको उनको भनाई छ ।
टिजरमा हेर्नुहोस निकिताको ‘रानी महल’ (भिडियो)
लकडाउनकै बीच 'रानीमहल'को फष्टलुक सार्वजनिक
निर्मला पन्तको जीवनमा आधारित फिल्म ‘कोपिला’ डिस होममा आउँदै
हलमा दर्शक नपाएको ‘झ्यानाकुटी’ युट्युबमा हिट
‘छक्का पन्जा ३'ले चुट्किला धेरै भएको आरोप खपेपछि नबन्ने भयो 'छक्का पन्जा ४'
युट्युबमा हेर्नुहोस यी सात उत्कृष्ट सर्ट मुभि (Short Movie)
दर्शकहरु अघाँइसकेपछि पनि ‘नाई नभन्नु ल ६’ बन्ने
युट्युबमा हेर्नुहोस सौगात र बेनिशाको ‘झ्यानाकुटी’ (पूरा फिल्म)
कोरोनाको त्रासबीच देखियो ‘देवी’को फस्टलुक
मिडिया माथि साम्राज्ञीको आक्रोश
असार, काठमाडौं । नेपाली चलचित्रकी लोकप्रिय नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्
५ महिने बालक बचाउन अहोरात्र खटिदै कलाकार स्वस्तिकाका दिदीबहिनी
असार, काठमाडौं । कलाकार स्वस्तिका लामिछाने बिरामी पाँच महिनाको ब
नेपाल शास्त्रीय संगीत समाजको अनलाइन कार्यक्रमको ६० दिन पुरा
सुनिसा र जीवेशको ‘फुलबुट्टे चोली (भिडियो)
वर्षाको अगाडी संजोक खडा, अति भएपछि बल्ल बोले
बिना लक्षण देखिएको कोरोनालाई किरणले जिते
काठमाडौं । वि.सं. २०५५ मा सालमा शास्त्रीय सङ्गीतका तीनै विधा (गायन, व
Artistkhabar.com © 2017. All Rights Reserved